Antony Raj Jayamani onye na-eso ụzọ anyị si na Linkedin | Ọrụ - Ọrụ - Lovehụnanya Dubai!
Antony Raj Jayamani onye na-eso ụzọ anyị si Linkedin. Ọ jisiri ike zitere anyị ozi ngwa ngwa na nke ya emelitere foto si Dubai.
Lee m bịara gaa Dubai wee bido oru m na Machị 5th 2018. “Mgbe m na-abịa Dubai, abụ m efu, enweghịkwa m ihe ngosi ọ bụla gbasara ụwa. Mgbe otu afọ gachara Dubai na-eme m nwoke ma nyekwuo m obi ike wee nwekwuo ihe ọmụma. Dubai gosiri m ọkụ si n'akụkụ dị njọ nke ndụ m n'ọrụ m. Ugbu a ọ dịla ka ụlọ nke abụọ, ọ masịrị m ịnọrọ na Dubai. Achọrọ m maka ihe ịga nke ọma kachasị mma maka uto Dubai. Enwere m ekele dị ukwuu maka ikpo okwu a iji kpughee izi m m.
Ntak Antony họrọ Dubai?
Onweghi okwu nwere ike ịkọwa Dubai na onye isi ya. Ọtụtụ ndị njem si India gara Dubai ọbụlagodi n’oge 2 ma chee na ha nwere ike gaa biri ma rụọ ọrụ ebe ahụ. Ihe niile zuru oke ma dịkwa mma n'anya. Ọ dị ka Eluigwe n’elu ụwa.
Ọtụtụ mmadụ nwere obi ụtọ. Anyị niile chọsiri ike ka obodo ebe obibi anyị dị ka United Arab Emirates. Ọzọkwa, jisiri ike ka onye isi Dubai na-eso dị ka ihe atụ nke Olee otú ha kwesịrị ịdị na ụmụ amaala ha. Dubai nwere ụwa niile dị na ya. Oh, Dubai kedu ebe mara mma iji bie ndụ gị. Anyị niile chọrọ ka anyị chọta Job n’ebe ahụ dịka onye nrụpụta ihe ma ọ bụ onye njikwa.
E nwere ezigbo ezigbo Energy n'ebe ahụ!
Dubai bụ obodo azụmaahịa, ebe ekwuru ya mgbe ị gbadara na Dubai ma rụọ ọrụ ebe a. Will gaghị enwe owu ọmụma, ndị mmadụ na-ele ọbịa nke ọma, gụrụ akwụkwọ na ndị ọzọ. Iji bido oru ichu nta nwere ike idi nsogbu, n'ihi asọmpi n'ahịa taa. Nke ahụ mekwara ka ndị mmadụ jiri amamihe họrọ nke a, a ga-ahọrọ ndị maarala ahụ nke ọma karịa maka ọrụ ka mma.
Ma ebe a ka ga-enwe ike ile ọbịa ike, yabụ ọ bụrụ na ị na-akwado onwe gị nke ọma, dịkarịa ala na-arụ ọrụ ka ụlọ ọrụ ụfọdụ wee nwee ike iwepụta ego buru ibu karịa itinye ego dị ala na iwere ọrụ ọkachamara, na mgbe ị na-achọ ọrụ na Dubai jide n'aka na ezigbo weebụsaịtị. Websitesfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-eme mkpọtụ nwere ike ịdaba gị n'okpuru nku ha wee jụọ maka ego, ebe ọ dịghị ụlọ ọrụ ga-arịọ maka ego maka ụdị ọrụ ọ bụla.
Dubai ọ bụghị nke dị mfe ịnweta ọrụ a chọrọ
Nke kachasị, aga m asị na ọ bụghị nke ahụ mfe adaa na ọrụ achọrọ, kama were ọkwa nbanye gị nke ọ bụla kachasị amasị gị. Mgbe emesiachara ha nkwekọrịta mbụ gị Gbalịa itinye akwụkwọ maka ọnọdụ ọzọ na UAE. N’ezie igha enweta udiri gi choro mgbe inyochachara ihe nlele na Dubai.
DUBAI, nwa m nwanyi, i bu Dụfụ, Uọfọn, Bezi omume,
Anyị niile hụrụ n'anya Dubai City!
Dubai bụ otu kachasị obodo azụmahịa dị ugbu a na Middle East. Ọ bụ ngwakọta nke Indian na Pakistani, Ọzọkwa, Iranians na Filipino ezumike. Obodo a bụ ebe dị ugbu a, nke a na-enwe n'ọdịnihu, nke na-agbanwe agbanwe na ebe dị iche iche maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ ọ bụla.
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ ọdịnala dị iche iche n'otu ebe wee gaa Mara ọdịnala Arabụ n’otu oge.
E nwere ọtụtụ ebe n’obodo maka ịgagharị na iji mee ihe ọchị. Taa, anyị ga-achọpụta ụlọ nri na ụlọ mmanya. Mpaghara mara mma bụ Dubai Marina, mpaghara jupụtara na ụlọ oriri na ọ niceụ niceụ na ụlọ mmanya mara mma nke nwere ọmarịcha ụlọ nkwari akụ Burj Al Arab. Nwere ike ịnụ mpaghara mpaghara Arabic na-anwa nri Arabic mgbe ị na-ahụ shisha-ngwaọrụ na-a smokingụ sịga na mpaghara nwere isi dị iche iche. Barista bụ ebe nke abụọ jupụtara n'ọba na cafeterias ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ya agwakọta na ọtụtụ ndị mmadụ ụwa niile ma nwee ọ timeụ.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na Dubai
Ebe nke ato bụ osisi Armani na Burj Khalifa. Club mara mma nwere ezigbo ọmarịcha gburugburu, egwu dị mma na cocktails dị ụtọ. Ka anyi ghara ichefu ozara a. Ọ bụrụ n’ịgaghị na ndị a gbahapụrụ mgbe ahụbeghị ị gara Dubai. Ingga njem dị n'ọzara bụ otu n'ime ahụmịhe kasịnụ. Iji ụgbọ ala na-awụda n'ájá, ịnya kamel, na-eri nri abalị mgbe ị na-ele egwu Arab Ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu nke bụ ihe ị ga-emerịrị mgbe ị na-eleta Dubai.
Ebe E Si Nweta: https://www.armanihoteldubai.com/
Ma banyere nke a, m ga-ekpughere n'isiokwu na-esonụ ebe anyị ga-achọpụta ọzara na ihe dị ịzụ ahịa na Dubai. Nke a bụ obodo na-ezo ọtụtụ ebe dị ịtụnanya na ihe omume ga-enyocha. Dubai bụ otu n’ime obodo na-adọrọ mmasị ma maa mma n’ụwa.
Nọrọ nụ maka njem ọzọ!
A maara Dubai dị ka obodo azụmahịa, ebe a na-ekwu na nde mmadụ na-agbadata Dubai maka ọrụ ma ọ bụ obere azụmahịa, ọ dịghịkwa mgbe ọ ga-adị ha ka ọ bụ ụlọ nke abụọ ha. Ndị mmadụ na-ele ọbịa nke ọma, gụrụ akwụkwọ ma nwee ọtụtụ ihe ịchọrọ na Dubai.
Dubai na-eto kwa ụbọchị, n'ime ọtụtụ afọ ọ gbanwere nke ukwuu, Expo 2020 dị n'ihu ebe karịa mba 190 ga-esonye na mbido Ọktoba 2020. N'ịbụ onye wuru Obodo na Dubai na-eme ka njem dị mfe karịa, okporo ụzọ dị egwu n'okporo ụzọ na-eduga mmadụ gwụ ike na ndị mmadụ na-ahọrọ metro kama ijide ụgbọ ala ma ọ bụ tagzi, na-abụghị Dubai nwere ụlọ ọgbara ọhụrụ na ihe ntụrụndụ na-ebi ndụ abalị, ọtụtụ ụlọ nri ịhọrọ ndị mmadụ nọ na Dubai bụ anụ oriri buru ibu, ị nwere ike ịnwale ọtụtụ nri nri n'akụkụ ụwa niile.
A makwara Dubai dị ka otu n'ime obodo ndị kasị dịrị nchebe n'ụwa, ebe ọnụego mpụ na-adị obere, na Dubai bụ naanị obodo na ụwa nwere Na-enweghị Supercars, ọ na-ala azụ n'oge ndị mmadụ nọ na Dubai nwere ịhụnanya dị ukwuu maka ụgbọ ala, iji mee ka ọ bụrụ ihe ndị uweojii Dubai na-adọrọ mmasị agbakwunye supercars na ụgbọ mmiri ha nke gụnyere Buggati, Aston Martin, Rolls Royce, na ọtụtụ ndị ọzọ. A makwaara Dubai maka Celebrity Hub, ebe otutu Ememme Movie, Onyinye A na-eme eme kwa nkeji.
Ndị na-eme ihe nkiri n'ụwa niile ịhụnanya maka Dubai na adres dị ka ụlọ nke abụọ ha, ha na-abịa ebe a maka ịzụ ahịa, zukọta ma kelee ndị ọbịa na maka agbapụ ihe nkiri ọkachasị na Ọnọdụ egwu dị ka Burj Khalifa, Burj Al Arab, na Jumeirah osimiri, E wezụga showbiz, Little anyị maara na Dubai na-arụ ọrụ ebere n'ọtụtụ buru ibu, ndị mmadụ nọ ebe a kwenyere na ndị na-ekerịta ihe na-elekọta, ha na-enyere ndị ogbenye aka na-aga, mgbe obula ha biara n'agbanyeghị ụdị ọghọm ọ bụla ha ruru n’oge adịghị anya iji hụ na ọ nweghị nchebe.
Onye ọchịchị Dubai HH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum na Hollywood omee Tom Cruise (Business Arabian)
Naanị Dubai ka a na-eme maka ndị na-achọ ọrụ?
Ndị na-achọ ọrụ na Dubai nwere ike ibi ma rie nri n'efu n'ebe ụfọdụ, ebe ndi Dubai agbatịwo aka ha iji nyere ndị na-achọ ọrụ aka otu ha nwere ike, ndị mmadụ ga - amalite iche n’echiche ma ọ bụrụ n’ezie n’efu, ọ bụghị maka mmadụ niile mgbe m kwuru n’efu, enwere ụfọdụ ndị obodo akọwapụtara nke na-emeso ndị na-achọ ọrụ ọrụ nke ọma, nke a na-egosi na mmadụ na ndị mmadụ ndị na-agba mbọ inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka.
Ma ọ bụ ọbụna ọ bụrụ na ịkwesịrị ibi na okirikiri ị nwere ọtụtụ nhọrọ na ọnụ ala ọnụ na ọrụ ọgbaghara, enwere ụlọ ndị ọbịa na-adị ebe ụfọdụ onye na-achọ ọrụ nwere ike ịhapụ oge ụfọdụ dabere na Visas gị, tupu ị gbadaru na Dubai, ga-eme nyocha kwesịrị ekwesị ọfụma maka ndị na-ahụ onwe ha dị ka ndị ọbịa n'obodo, maka ndị nwere ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ nwere ike ịdịrị onwe ha mfe.
Ikwesiri ima banyere iwu okporo ụzọ Dubai, kpachara anya mgbe ị na-agafe ụkwụ ị nwere ike kwụsị ịkwụ ụgwọ dị mma n'ihi ịgbaso iwu, ịkwanye ahihia n'okporo ụzọ, fesaa n'okporo ụzọ nwere ike ibute gị na nsogbu, yabụ kpachara anya ma zere ihe omume ndị dị otú a, mgbe niile ga-ebu okike visa ịnọrọ n'akụkụ nchebe ka ndị uwe ojii nwere ike ijide gị n'ụlọ mkpọrọ maka ịdeghị akwụkwọ gị dị mkpa ruo mgbe ịnwere IDE nke Emirates, nke will ga - enweta ya mgbe ị mechara ọrụ, ndị a bụ ụfọdụ eme na adịghị.
Kedu otu esi amalite ọrụ na-achọ na UAE?
Iji malite ịchụ nta ọrụ nwere ike ịbụ obere ihe, n'ihi asọmpi ndị a na-ebute taa na ndị mmadụ na-ahọrọ iji amamihe họrọ ọnọdụ, enwere ndị si mba dị iche iche nwere ọtụtụ onyinye, nka na ndị nwere ezigbo ọfụma ka a ga-enyekwu mmasị nke bụ eziokwu.
Yabụ, ọgaghị abụ ihe na-atọ ụtọ, yabụ ma ọ bụrụ na ị bụrụ fresres ịkwadebe onwe gị nke ọma, nọrọ opekata mpe ịrụ ọrụ nke mere na ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ike inye ego buru ibu kama itinye ego dị ukwuu na iwere ndị ọkachamara n'ọrụ, ụfọdụ ndị na - ewe akwụkwọ na - agbadata ala. ndị na-achọ ọrụ na Kuwait.
Freshers kpọmkwem, ewezuga nke ahụ mgbe ị na-achọ ọrụ na Dubai jide n'aka na ezigbo weebụsaịtị, ụfọdụ websaịtị nwere ike ịdaba gị n'okpuru nku ha wee chọọ maka ego, ebe ụlọ ọrụ ọ bụla agaghị arịọ maka ego ụdị ọrụ ọ bụla ọ bụrụ n’ịhụ n’otu ọnọdụ a nọrọ na nche.
Iji zere ihe omume ndị a, ị ga - ejide n'aka Google ọfịs ha ma gụpụta nyocha na ntanetị ka obi sie gị ike na ị ga-ahụkwa ụfọdụ ndị ọrụ ọrụ ebe ha na eme nkwadebe maka ndi tozuru etozu Dị ka ọrụ gị na-arụ, wee rịọ maka pasent ụfọdụ nke ụgwọ ọnwa mbụ gị naanị mgbe ị bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado, nke ahụ bụ ihe dị mma ịkwụwa aka ọtọ, n'ihi na ha nwekwara njikọ aka na ụlọ ọrụ ha na-eme ka ọrụ gị dịkwuo mfe, yabụ na ha bụ ezigbo mmadụ anaghị echegbu onwe gị banyere wayo dị ka ha dị ebe a iji nyere ndị Freshers aka.
Jiri naanị ọrụ legit na Dubai!
Also ga-ahụkwa ọrụ nkesa nkesa CV na UAE, a na m akwado n’onwe m ịhapụ ịhọrọ nke ahụ n’ihi ha ka ekesara CV gi ka izugbe email ids nke random ụlọ ọrụ nke a ga-ahụ na ha weebụsaịtị ma ọ bụ akaụntụ LinkedIn, ebe ị nwekwara ike ịme ihe ndị dị otú ahụ site na ịchọta njiri email na weebụsaịtị ha.
Oge ugbu a na UAE ingmepụta ụzọ ụgbọ ala adịgboroja abụrụla ihe, na-akpata ego site n'aka ndị aka ha dị ọcha, ndị ahụ sitere n'obodo dị iche iche Ha dabere na ọnyà ha n'ụzọ dị mfe, n'echeghị echiche ozugbo ha kwụrụ aghụghọ wayo na-atụ anya ọrụ na nloghachi, ntakịrị ihe ha maara banyere ndị aghụghọ nke Dubai mgbe niile na-eso ndị ahụ na-eziga ma ziga ozi na-agafe agafe UAE iji zọpụta ndị mmadụ na aghụghọ aghụghọ na Dubai.
Karịa ihe m ga - ekwu Ọ dịghị mfe ịbanye n'ọrụ achọrọ, karie iburu ụzọ nbanye dị larịị ọ bụla kachasị amasị gị, mgbe ị gụchara ha nkwekọrịta mbụ gị Gbalịa itinye akwụkwọ maka ọnọdụ ọzọ wee malite nyocha gị ị gha enweta ọnọdụ ịchọrọ, ahụmịhe na-akuziri gị ọtụtụ ihe, ọ ga - eme ka ntụkwasị obi sikwuo ike, ị ga - azụlite ikike ọrụ gị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N’otu aka ahụ, nyere ndị ọzọ aka, mee netwọk, zute ndị ọhụrụ kwa ụbọchị na-achọ enyemaka site na ha ị ga-enwerịrị ọrụ na Dubai, UAE.
Na agbanyeghị, Ọ bụrụ na enwere ọrụ ọ bụla etinyere na profaịlụ gị, biko gbali iku HR manager ASAP. Shouldkwesịrị ịdị njikere ịnye ọrụ gị na ire ahịa / azụmaahịa / nlekọta ndị ahịa / ịre ahịa ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla dabara adaba n'ọrụ enyere gị.
Ọtụtụ n'ime Nrọ ala ọzọ bụ ịchọrọ ịrụ ọrụ na mba GCC iji bulie ohere ha ji arụ ọrụ. You kwesịrị ịdị njikere ịrụ ọrụ ebe ọ bụla na mpaghara Gulf dị ka Dubai / Qatar / Oman / Abu Dhabi / Bahrain / Kuwait wdg
Ọ bụrụhaala na ha enye gị ọrụ na mpaghara Ọwara. Yabụ, ọ bụrụ na itinye akwụkwọ maka ọrụ na ntanetị ntanetị maka afọ 4 / 5 gara aga na-enweghị nsonaazụ ọ bụla. Gbalịa ịkụtụ obere ihe. Bulite ihe mmalite gaa n'òtù anyị ma malite ịtụ anya inweta nzaghachi dị mma sitere na "Dubaicitycompany".
Oge m bi na Dubai, a na-ewere ya ka ụlọ
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ gbabara n'ime ọkpụkpụ m.
E leghị Dubai anya dị ka mmerụ ahụ.
A na-eji nkeji ọ bụla emefuru akpọrọ ihe.
Ọ dị ka ikiri otu nwa agbọghọ na-etolite n'ime nwanyị mara mma
Nwa ojii na ndi ocha, ndi umuaka na ndi okenye, ha niile wee ju ama ilele a nwanyi etolite.
Dị ka umengwụ na-amakwụ n'ikpere mmiri.
Dubai wetara ịhụnanya niile.
Bịa na Dubai ..
Ohere buru ibu na-echere gị!.
- A gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ? Ị ga-abụ kpakpando na-ebili.
- Ogologo oge? Ezinụlọ gị ga-enwe nchebe na omenala anyị.
- Onye isi? Oge ị ga-ewe ihe ubi uru nke oge ndu n’ime nka.
N'agbanyeghị ebe ị nọ taa, anyị kwenyere na ị ga - agbanwe ọdịiche taa site na isonyere anyị na Dubai. Obodo anyị mara mma- ebe ọzara na-ezute mbara igwe na Innovation na-eduga ọrụ- bụ ụlọ na-esote gị, nnukwu ịkwaga gị.
Bịa ma bụrụ akụkụ nke ezigbo obodo hiwere site na afọ ezi ndụ nke ezinụlọ, ọysụ, ihe isi ike, nkwụsi ike na ahụmịhe gọvanọ iji wee bụrụ ntọala dị mma maka ndụ dị mma maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị niile na-agba mbọ.
Soro anyị taa!
Nwere olileanya na ị ga-ekpebi ka Anonymous Raj Jayamani onye na-eso anyị si Linkedin bia na United Arab Emirates. Ma ụlọ ọrụ Dubai City na-ezute atụmanya gị na usoro nke na-enye nduzi maka ịrụ ọrụ na ibi na Middle East.
Soro ụlọ ọrụ Dubai City na Linkedin dị ka:
Anonymous Raj Jayamani onye na-eso anyị si Linkedin!
Companylọ ọrụ DCC ugbu a na-enye ozi maka expats. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.